Cutubyada qalabka isku dhafan ee TURBO MULTIPLICATEURS soo-saare gearbox
Cutubyada qalabka isku dhafan ee TURBO MULTIPLICATEURS
Khadadka Weyn ee Xawaare Kordhinta Codsiyada Waxqabadka Sare
Xawaare sare oo xawaare ku socda Gearbox Xawaare Ka socda Sogears Production TURBO-MULTIPLICATEURS Unugyada qalabka isku-dhafan, Unugga Core ee nidaamyada kombuyuutarrada aadka u hufan.
Xawaare kordhinta xawaaraha Gearbox
Isku-dhafka qalabka isku-dhafan & Isku-dhafnaanta Turbo
Xawaare Kordhiyeyaasha waxaa lagu soo saaray cabbirro kala duwan oo loogu talagalay alaabooyin iyo suuqyo kala duwan. Sanduuqyadan gear-ka ah ee sida gaarka ah loo dhisay waxaa loogu talagalay loona dhisay inay qaabeeyaan qaybo gaar ah oo RPM ah. Xalalka Kordhinta Xawaaraha Gaarka ah, ee ka imanaya soosaarayaasha gearbox sax ah NER GROUP. Waxqabadka Sare, Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Waxaan Naqshadeynaynaa iyo Soo Saarnaa Qaybaha Qiyaasta: Sax Gees, Kordhinta Xawaaraha Caangaarka leh isku xidhka duubista, Guryaha SAE, xitaa waxay noqon karaan been abuur bir ah oo culeys laga saaray, bamka mashiinka dhejiska ee la soo saaray. , haddii loo baahdo. Codsiyada caadiga ah ee waxqabadka sare loogu talagalay xawaareeyaasheena xawaaraha waxaa loogu talagalay bambooyin, koronto-dhaliyeyaal, jajabiyeyaasha dhagaxa, kombaresarada, isku-darka, leylisyada iyo jibbaarada.
Waxyaalo badan oo Gearboxes ah
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, oo qiime jaban leh. Naqshadeynta sanduuqa qalabka xawaaraha lagu kordhinayo oo kordhin kara 12 rpm illaa 1400 rpm, Custom Gearboxes, torque sare iyo si weyn loo diyaarin karo si ay u fiicnaato.
Waxaan leenahay koox xoogan oo aan u qaabeyno sanduuqyada gearbox-yada sida gaarka loo dhisay la jaan qaadi kara qaybo gaar ah oo RPM ah. Warshadaha culus ee gearboxes-yada xawaaraha badan.
Boorsooyinka xawaaraha sare waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah codsiyada muhiimka ah. Bokisyo xawaare sare leh ayaa la heli karaa sida xawaareyaasha xawaareha iyo kuwa xawaareynaya xawaaraha loo adeegsado goobo badan oo aan duulista ahayn, codsiyo warshadeed
Soo hel Buugga-haynta
Soo-saareyaasha cabbirka jaangooyooyinka sare ee cufnaanta meeraha oo ay kujiraan xawaare kordhinta nidaamyada warshadaha.
Gawaaridaan alaabada lagu dhisay waxaa loo habeeyay loona habeeyay sidii ay u waafajin lahaayeen agabyo gaar ah oo RPM ah. Xirmooyinkan waxqabadka sare waxaa lagu dhajiyay galinta iyo soosaaraynta shaashadda oo leh 90-digrii xagloWargeysan oo ku habboon xagal bevel gear beled oo loogu talagalay torque-yada xawaaraha sare ee qalabka ayaa ah qaybo muhiim ah oo badan codsiyada lagama maarmaanka ah
Bokisyo xawaare sare leh ayaa la heli karaa sida xawaareyaasha xawaareha iyo kuwa xawaareynaya xawaaraha loo adeegsado goobo badan oo aan duulista ahayn, codsiyo warshadeed. Xulashada dambe ayaa siineysa dadka isticmaala awooda ay ku leeyihiin dhimista xawaaraha-xawaaraha sarre ee xawaaraha sare ama xawaaraha sarre ee xawaaraha sare.
Waxaan ku takhasusay inaan siino macaamiisheenna xalal xawaare sare oo gearbox ah. geerka usheeda dhexe, geerka lagama maarmaanka ah, geerka meeraha ah iyo qalabka geesaha ee awood qaybinta. Loo muujiyey inuu yahay mid la isku halleyn karo, aamin ah, is haysta isla markaana hufan, Sundyne HMP 7000 oo isku-dhafan oo bambooyin dulsaaran oo leh illaa 4 marxaladood ayaa bixiya tiro faa'iidooyin hawl-kar oo aad u sarreeya ah :. Haddii aad haysato alaabada aad jeceshahay, kaalay oo nala soo xiriir! Diyaar ayaan nahay oo waxaan rajeynaynaa iskaashigeenna. Waxaan u qaadaneynaa tayo ahaan faa iidadeena iyo qiimaha ugu hooseeya waa daacadnimo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawinno!